Indawo yokudlela yase-Reception Hall - iBellavista - Messina
Indawo yokudlela yaseBellavista - Messina
Ikhwalithi esimweni esihle kakhulu
4.8 /5 amavoti (amavoti angama-31)
Indawo yokudlela yaseBellavista, ngo-Circuito Torre Faro a Messina, ingenye edume kakhulu futhi yasungulwa Izindawo zokudlela yedolobha. Iqhayisa ngephanoramu evumayo ehambisana ne Amakhono wezinhlanzi nezinye izitsha ezihlanganisa Isiko kanye I-Nouvelle Cuisine. Futhi Igumbi lokwamukela Imicimbi yakho.
Indawo yokudlela yaseBellavista eMessina - Isiko neNouvelle Cuisine
Indawo yokudlela yaseBellavista, ngo-Circuito Torre Faro a Messina, uyisibonelo esiphelele sendlela yokuhlanganisa ubumnandi bokunambitheka kanye namaphunga eSisily nokusungulwa kwe I-Nouvelle Cuisine. kuqala e Izifundo zesibili ungalokothi u-banal futhi usobala, kepha kunambitha okungaka kanye nekhwalithi ephelele. Ukuvuselelwa kwe I-Pesce ukubamba kosuku nokunambitheka kwe Izindlela zokupheka ezejwayelekile AbakwaMessina bahlangana nsuku zonke ukunikeza amakhasimende abo aqotho injabulo engenakulinganiswa yokudla. Ngaphezu kwalokho, i- Isela iqhayisa ngohlu olubanzi lwe Amawayini amhlophe namaRed Local, Okwezwe ed Foreign nobubanzi obuhlukahlukene be Amabhamuza kaZwelonke ed Estere amathoyizi akho. Gubha lapho I-Ristorante Bellavista kwenza ngamunye Umcimbi angalibaleki. Izinsuku zokuzalwa, iziqu, imikhosi, imishado:Indawo yokudlela yaseBellavista futhi Igumbi lokwamukela nge-panorama yayo enchanting ngaphezulu kwe-Strait of Messina nobuciko bayo be-Culinary, kuyisilungiselelo esifanele sazo zonke izehlakalo zakho ezibaluleke kakhulu.
Indawo yokudlela yaseBellavista eMessina - Isipiliyoni kanye noPastor kudluliselwe kuBaba kuya eNdodaneni
Indawo yokudlela yaseBellavista a Messina, uyaziqhayisa a Isiko Lamasiko okudluliselwa kusuka kubaba kuya endodaneni: ubaba uGiovanni, ubonga isipiliyoni esikhulu njengompheki kulo lonke elase-Italiya naphesheya kwezilwandle, kanye nendodana yakhe uMarcello, odla ifa lePhupho Lokunakekela ubaba wakhe futhi unakekela ukwamukela okungcono kakhulu Amakhasimende, anikela ngabo bonke ubuciko bawo kanye nenhlonipho ukukunikeza okuhlangenwe nakho okuhlukile kwe-gastronomic! IBellavista futhi iyigumbi lokwamukela abantu. Isitsha ngasinye senziwa ngokuqinile ngezinto ezenziwe ngendwangu ezikhethwe ngokucophelela ngekhwalithi nokuphakama kanye nenhlonipho enkulu yemithetho eyisisekelo yokuhlanzeka nokuphepha. Ngaphezu kwalokho, i Isela i-del Indawo yokudlela yaseBellavista iyazibhebhezela kuhlu oluphelele futhi oluhlukahlukene lwamawayini endawo, kazwelonke nawangaphandle abomvu nohlu olubanzi lweewayini zezwe lonke nezangaphandle.
Indawo yokudlela yaseBellavista eMessina - Ikhwalithi ne-courtesy
Indawo yokudlela yaseBellavista, ngo-Circuito Torre Faro a Messina, bekulokhu kuhlobana ne-Taste and Quality ngenxa yokubonga okukhulu kwe-Culinary ye-Chef yayo kanye nokusebenzisa Izinto zokwakha ezikhethiwe okusha njalo. Vumela umangale yiphunga elimnandi laseSisili ngezindlela zokupheka eziletha etafuleni lonke ukunambitheka kwezithelo okunikezwa yilomhlaba nolwandle lwawo. Amaresiphi awakaze avinjwe futhi abhalwe ngezifiso ngokuthinta okungaphezulu kwe-Chef, akhonze endaweni enezimpahla ezinhle nokunethezeka okucashile ngaphezulu kwe-Strait of Messina, ephelele Igumbi lokwamukela. Ngokusobala konke kuhambisana bomsebenzi futhi kusuka Ngenhlonipho abasebenzi, ozokubeka ukhululekile futhi akucebise ezitsheni zosuku newayini.
Ikheli: Nge-Circuito, uTorre Faro
I-POSTAL CODE: 98164
Ucingo: 090 326682
Umakhala ekhukhwini: 393 9162061
Inombolo ye-VAT: 03086670837